Archive du 20191125
Fiara raitra lasa resabe An’olon-kafa sa an’ny Filoha ?
Niteraka resabe tany anaty tambajotran-tserasera ny fiara raitra dia raitra marika Range Rover nitondra ny filoham-pirenena tany Toamasina ny faran’ny herinandro teo.
Kaominin’Andriambilany, distrikan’i Vakinankaratra Hatao filamatry ny fihavanana
6.000 isa mahery ireo kandida ben’ny tanàna ary 5.000 eo ny mpanolotsaina amin’izao fifidianana izao,
Kaominina Andoharanofotsy Efa niasa, ary mbola hiasa I Gasy
Manomboka voarain'ny mponin'Andoharanofotsy ireo foto-kevitra 3 lehibe ijoroan'ny Tia Tanindrazana dia Fanabeazana, fitsinjaram-pahefana ary teknolojia.
Safidin'Antananarivo Hamaritra ny tohin’ny tantara…
Manana anjara toerana manokana amin'ny politika sy ny tantaram-pirenena foana ny ben'ny tanànan’Antananarivo Renivohitra. Sokajiana ho manana toerana goavana ara-politika izay ho lany eo.
Augustin Andriamananoro Nijoboka sy tsy nahafehy tena…
Mila olona afaka miara-miasa amiko aho amin’ny fampandrosoana, hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fitokanana ny kianja ao Barikadimy omaly.
Tahina Razafinjoelina Hanampy ny kandidà Gasy rehefa lany
Ny sabotsy teo no faradoboka niarahan’ny kandidà Gasy N°3 ao anaty bileta tokana, niarahana tamin’ny vahoakan’Andoharanofotsy.
RADO RAMPARAOELINA Efa azo antoka ny vato 85 %
Efa azo antoka ny isam-bato 85 % ho an’ny kandida Rado Ramparaoelina, mpifaninana ho Ben’ny tanàna ao anatin’ny kaominina Ampitatafika.
Orinasa JIRAMA « Tsy hiaina trosa sy fatiantoka any amin’ny taona 2021 »
Ny olan-drano sy herinaratra mitarazoka efa hatramin’ny taona maro ny famahana azy.
STADIUM BARIKADIMY TOAMASINA Nosantarin’ny Ajesaia ny fandresena
Taorian’ny lanonana fitokanana ny Stadium na kianja manara-penitra ao Barikadimy Toamasina notarihan’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, omaly alahady 24 novambra 2019,
Fanondranana makamba Nahatratra 9.287 taonina ny taona 2019
Sehatra anisan’ny mampidi-bola anatin’ny kitapom-bolam-panjakana ny lalam-pihariana makamba.
Tanànan`Ankaramalaza Nisitraka fanampiana ireo traboina
Taorian`ny fahamaizana nitranga tao amin’ny tanànan’Ankaramalaza,
CORPS DE PROTECTION CIVILE 16 taona namonjena ain’olona
Efa hofanina amin’ny famonjena ain’olona ihany koa ankehitriny ny miaramila.
FANANGANANA TRANON’NY MPANJIFA Nahasola sy nahafotsy volombava, hoy Ralita Be
Ny minisitry ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana Malagasy (MICA), Rtoa Rakotomalala Lantosoa, notronin’ny Talen’ny
FISOROHANA NY LOZAM-PIFAMOIVOIZANA Tsy azo ampiasaina ny jiro “Led” an’ny fiara
Manomboka mandray andraikitra amin’ireo jiro « LED » ny mpitsirika fiara.